Vahaolana momba ny fahasalamana - Medical Aid International
Vahaolana momba ny fahasalamana
MedAid dia manam-pahaizana manokana amin'ny 'Manatsotra ny sarotra'; manolotra fonosana mifono, azo entina ary namboarina ho an'ny tontolo klinika rehetra izahay.
Cover Arboped Orthopedic Drill
Ny rafitry ny fandavahana orthopedic mahazatra dia lafo ary matetika ny fandavahana iray dia matetika tsy ampy noho ny fotoana ilaina amin'ny fanadiovana sy fanafoanana ny sela.
Ny iray amin'ireo faritra tena ilaina, nefa matetika tsy raharahiahy, amin'ny fampiroboroboana ny fitsaboana ara-pahasalamana eran'izao tontolo izao dia ny fanaovana sterilization.
Lisitry ny fanomanana ny fandidiana MAI
Amin'ny maha-fikambanana antsika, tompon'andraikitra amin'ny torohevitra sy fampitaovana karazana klinika isan-karazany amin'ny toerana iva izahay. Anisan'izany matetika ny sampana fandidiana
Latabatra fiasa MAI
Miasa isan'andro isan'andro amin'ny tontolo iainana ambany dia hitanay fa ilaina maika ny takelaka fandidiana tanana marobe sy marokoroko izay manome amin'ny sehatry ny fitsaboana rehetra.
Voangona ao anaty kitapo mena mahery miaraka amina kitapo zava-mahadomelina anatiny, ny entana rehetra dia tena avo lenta ary mora azo.
Manome vahaolana isan-karazany miorina amin'ny tontolo iainana sy ny filan'ny klinika izahay. Izahay koa dia manao ny «oximeter / capnografie» azo entina.
Ivotoerana fampianarana sy fihaonana
Ao amin'ny Medical Aid International Education and Meeting Center dia manana toerana tonga lafatra izahay ho an'ny fampiofanana rehetra sy ny filanao fihaonana.
Ny toeram-pitsaboana lehibe rehetra dia mila X-Ray azo itokisana. Na izany aza, any amin'ny tontolo iainana ambany dia ambany ny ankamaroan'ny toeram-pitsaboana sy hopitaly dia misedra fanamby maro amin'ity faritra ity izay mety hisy fiatraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny fikarakarana omena.
Natao ho ampiasain'ny tafika amerikana izy ireo ary tena matanjaka sy tsotra ary tsy misy takelam-by ao anatiny.
Ny latabatra fiasan'ny CE izay namboarina, vita Eoropeana, dia mandresy ny fanamby atrehin'ireo LMIC sy ny asa fanampiana ny voina.